measure obesity grading scientifically by Dr Om Murti Anil | Dr. Om Murti Anil
Overweight and Obesity 13494 viewed
मोटोपना थाहा पाउने धेरै तरिकाहरु छन् । यसको लागि तपाईं आप्mनो तौल ( किलो ग्राममा ) नाप्नुहोस । तपाइको उचाई कति छ ? सेन्टिमीटर वा मीटरमा पत्ता लगाउनुहोस् । कम्मर र हिप वरिपरि कति मोटाइ छ ? नाप्नुहोस । यी नापहरु थाहा पाइसकेपछि मोटोपना भए नभएको सजिलैसग पत्तालगाउन सक्नुहुन्छ ।
बडी मास इन्डेक्स (Body Mass Index)
BMI एक यस्तो अंक हो, जुन मानिसको वजन र उचाईबाट निकालिन्छ । यो मोटोपना पत्ता लगाउने एउटा भरपर्दो मापदण्ड हो । बि.एम.आई. २५ भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ । जस्तै ६५ किलोग्राम तौल भएको र १.६५ मिटर उचाई भएको व्यक्तिको बि.एम.आई. निकाल्दा, ६५÷१.६५ x १.६५ = २३.९० हुन्छ ।
तौल ठीक भए नभएको पत्तालगाउन आÇनो उचाई से.मी. बाट १०० घटाउनुहोस् । तपाईंको तौल (के.जी.) यो भन्दा कम हुनुपर्छ । जस्तै १६५ से.मि उचाई भएको मानिसको तौल ६५ के.जी. भन्दा कम हुनुपर्छ । उचाई (से.मि) – १०० = १६५ – १०० = ६५ के.जी. ।
वेस्ट हिप रेसियो पत्तालगाउन आÇनो कम्मरको मोटाई नाईटोको वरिपरि लिनुपर्छ र Hip को मोटाई सबैभन्दा फराकिलो ठाउमा लिनुपर्छ । यदि तपाईंको कम्मरको मोटाई ८५ सेन्टिमीटर र हिपको मोटाई १०० सेन्टिमीटर छ भने तपाईको वेस्ट हिप रेसियो ०.८५ हुन्छ । जुन सामान्य हो ।